Umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ezinsukwini zokugcina ukwahlulela kwesihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe, njengalokhu kuphrofethiwe eNcwadini YeSambulo. | IBandla LikaNkulunkulu USomandla
“Ngase ngibona isihlalo sobukhosi esikhulu esimhlophe nohlezi kuso, obuso bakhe babalekelwa yizulu nomhlaba; akutholelwanga indawo. Ngase ngibona abafileyo, abakhulu nabancane, bemi phambi kukaNkulunkulu; futhi izincwadi zavulwa: nenye incwadi yavulwa, okungeyokuphila: nabafileyo bahlulelwa ngalokho okulotshiwe ezincwadini, njengokwemisebenzi yabo. Nolwandle lwakhipha abafileyo ababekulo; nokufa nesihogo kwakhipha abafileyo ababekukho: base behlulelwa yilowo nalowo njengokwemisebenzi yakhe. Futhi ukufa nesihogo kwaphonswa echibini lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili. Futhi lowo ongafunyaniswanga elotshiwe encwadini yokuphila waphonswa echibini lomlilo” (IsAmbulo 20:11-15).
“Ukwahlulela” emazwini akhulunywe ngaphambilini—ukwahlulela kuyoqala endlini kaNkulunkulu—kusho ukwahlulela okwenziwa uNkulunkulu namuhla kulabo abeza phambi kwesihlalo Sakhe sobukhosi ngezinsuku zokugcina. Mhlawumbe kukhona labo abakholelwa kulezo zimangaliso becabanga ukuthi uma sekufika izinsuku zokugcina, uNkulunkulu uyobeka itafula elikhulu ezulwini, ayokwendlala indwangu emhlophe kulo, bese kuthi ehleli esihlalweni sakhe sobukhosi esikhulu futhi bonke abantu beguqe phansi ngamadolo. adalule izono zomuntu nomuntu bese ngalokho anqume ukuthi ngabe bayokhuphukela ezulwini noma bayothunyelwa echibini lomlilo nesibabule. Noma umuntu angacabangani, ingqikithi yomsebenzi kaNkulunkulu ingeguqulwe. Ukucabanga komuntu akulutho ngaphandle kokuba yilokho okwakhiwe imicabango yomuntu nje futhi kuphuma emqondweni womuntu, kwaqoqwa futhi kwahlanganiswa kulokho umuntu akubonile wakuzwa. Ngakho ngithi, ngisho zingaba wubuhlakani obungakanani izithombe ezakhekile, aziyilutho nje nolungaphezu kwemidwebo futhi azinakuthatha indawo yohlelo lomsebenzi kaNkulunkulu. Vele, umuntu wonakaliswe nguSathane, ngakho angakwazi kanjani ukuqonda imicabango kaNkulunkulu? Umuntu ucabanga ukuthi umsebenzi wokwahlulela owenziwa nguNkulunkulu muhle kakhulu. Umuntu ukholwa wukuthi njengoba kunguNkulunkulu uqobo owenza umsebenzi wokwahlulela, kusho ukuthi mkhulu kakhulu futhi akanakuqondwa ngabantu abafayo; kumele kuzwakale emazulwini futhi kushukumise umhlaba, kungenjalo kungaba kanjani umsebenzi kaNkulunkulu? Ukholwa ngukuthi njengoba lokhu kungumsebenzi wokwahlulela, uNkulunkulu-ke kumele aphakame futhi abe nobukhosi lapho esebenza, futhi labo abahlulelwayo kufanele ukuba bakhihla isililo futhi baguqe ngamadolo becela intethelelo. Umfanekiso onje kufanele ukuthi muhle kakhulu emehlweni futhi uvusa imizwa ngokujulile…. Wonke umuntu ucabanga umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ukuthi ungomangalisayo ngokungaphezulu kwemvelo. Ngabe uyazi, nokho, ukuthi uNkulunkulu waqala umsebenzi wokwahlulela kubantu kudala futhi sonke lesi sikhathi wena ubuthokomele ekuthuleni kokungazi? Ukuthi ngesikhathi ocabanga ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela uqala ngaso ngokusemthethweni, sekuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu enze izulu nomhlaba kabusha? Ngaleso sikhathi, mhlawumbe uyobe nje usanda kuqonda incanzelo yokuphila, kodwa umsebenzi ongenamusa wokujezisa kukaNkulunkulu uyokuthumela, usagcwele ubuthongo, esihogweni. Yilapho-ke oyothuka usuqonda ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela usuphothuliwe.
UNkulunkulu uthule, akakaze avele kithi, kodwa umsebenzi Wakhe awukaze ume. Uhlola wonke amazwe, futhi uyala zonke izinto, kanti ubambelela kuwo wonke amazwi nezenzo zomuntu. Ukuqondisa Kwakhe kuhambisana nezigaba futhi kuvumelana necebo Lakhe. Uqhubeka ngokuthula, ngaphandle komsindo, futhi kade imikhondo Yakhe yadlulela kumuntu, isihlalo Sakhe sokwahlulela sisendaweni yonke sihamba ngesivinini sombani, kulandelwa ngokushesha ukwehlela kwesihlalo sobukhosi Sakhe kithi. Yeka indlela leso simo esikhulu ngayo, yeka ingqopha-mlando. Njengejuba, nanjengebhubesi elibhongayo, uMoya uyafika phakathi kwethu. Uhlakaniphile, ulungile futhi unamandla amakhulu, ufika ngokuthula phakathi kwethu, abe negunya futhi aphuphume uthando nobubele. Akekho okubonayo ukuza kwakhe, akekho okwemukelayo, futhi akekho owazi konke azokwenza. Ukuphila komuntu akushintshi; inhliziyo yakhe ayinamehluko, futhi unezinsuku ezijwayelekile. UNkulunkulu phakathi kwethu uphila njengomuntu ojwayelekile, njengomlandeli omangalisayo noma obaluleke kakhulu nekholwa elijwayelekile. Unezinto Zakhe azifunayo, imigomo Yakhe, futhi ngaphezu kwalokho, unobunkulunkulu okungekho muntu ojwayelekile anabo. Akekho oye waphawula ubunkulunkulu Bakhe, futhi akekho ofune umehluko phakathi kwesiqu Sakhe nesomuntu.
Abanye bakholwa ukuthi ngezinye izikhathi uNkulunkulu angeza emhlabeni ukuze abonakale kumuntu, lapho eyokwahlulela isintu mathupha, avivinye umuntu ngamunye kungasali muntu. Labo abacabanga kanjalo abasazi lesi sigaba sikaNkulunkulu osesimweni somuntu. UNkulunkulu akahluleli umuntu ngamunye, futhi akavivinyi umuntu ngamunye; ukwenza lokho bekungeke kube umsebenzi wokwahlulela. Ingabe ayifani inkohlakalo yaso sonke isintu? Ingabe asifani sonke isiqu sikaNkulunkulu? Okwahlulelwayo isiqu sesintu esikhohlakele, isiqu somuntu esonakaliswe uSathane, nazo zonke izono zomuntu. UNkulunkulu akehluleli amaphutha amancane nangabalulekile omuntu. Umsebenzi wokwahlulela kukhona okumelayo, awenziwa ngenxa yomuntu othile kuphela. Kunalokho, uwumsebenzi okwahlulelwa kuwo iqembu labantu ukuze kwahlulelwe sonke isintu. Ngokwenza Kwakhe lo msebenzi mathupha kulo lonke iqembu labantu, uNkulunkulu osenyameni usebenzisa umsebenzi Wakhe ukumela umsebenzi waso sonke isintu, ngemva kwawo oya ngokuya wanda. Nomsebenzi wokwahlulela unjalo. UNkulunkulu akahluleli uhlobo oluthile lomuntu noma iqembu elithile labantu, kodwa wahlulela abangalungile kuso sonke isintu—ukumelana noNkulunkulu kwabantu, ngokwesibonelo, noma ukungamhloniphi, noma ukuphazamiseka komsebenzi kaNkulunkulu, njalo njalo. Okwahlulelwayo yingqikithi yokumelana kwesintu noNkulunkulu futhi lo msebenzi ungumsebenzi wokunqoba ngezinsuku zokugcina. Umsebenzi nezwi likaNkulunkulu osesimweni somuntu okubonwa umuntu kuwumsebenzi wakwahlulela ongaphambi kwesihlalo esimhlophe sobukhosi phakathi nezinsuku zokugcina, izinto ezacatshangwa umuntu esikhathini esedlule. Umsebenzi owenziwa uNkulunkulu osesimweni somuntu uwukwahlulela ngqo okungaphambi kwesihlalo esimhlophe sobukhosi. UNkulunkulu osesimweni somuntu wanamuhla unguNkulunkulu owahlulela sonke isintu ezinsukwini zokugcina. Le nyama nomsebenzi Wakhe, nezwi kanye naso sonke isimo Sakhe, konke kungokwakhe. Nakuba umthamo womsebenzi wakho unomkhawulo, futhi ungabandakanyi indawo yonke ngokuqondile, ingqikithi yomsebenzi wokwahlulela iwukwahlulelwa ngokuqondile kwaso sonke isintu; akuwona umsebenzi owenziwa ezweni laseChina kuphela, noma owenzelwa isibalo esincane sabantu. Ngesikhathi somsebenzi kaNkulunkulu enyameni, nakuba umthamo womsebenzi ungabandakanyi indawo yonke, umela umsebenzi wendawo yonke, futhi ngemva kokuqeda umsebenzi osemthamweni wenyama Yakhe, lo msebenzi uyowusabalalisela ngokushesha endaweni yonke, ngendlela efanayo nalena ivangeli likaJesu elasabalala ngayo endaweni yonke ngemva kokuvuka nokunyukela ezulwini Kwakhe. Kungakhathaleki ukuthi kungumsebenzi kaMoya noma wenyama, kuwumsebenzi ofezwa ngaphansi komthamo othile, kodwa omela umsebenzi wayo yonke indawo. Ngezinsuku zokugcina, uNkulunkulu ubonakala enza umsebenzi Wakhe esebenzisa ukubonakala Kwakhe okusamuntu, futhi uNkulunkulu osesimweni somuntu uyena owahlulela abantu esesihlalweni esimhlophe sobukhosi. Kungakhathaleki ukuthi unguNkulunkulu kaMoya noma wenyama, lowo owenza umsebenzi wokwahlulela unguNkulunkulu owahlulela isintu ngezinsuku zokugcina. Lokhu kuchazwa ngokusekelwa emsebenzini Wakhe, akuchazwa ngendlela abukeka ngayo ngaphandle noma kwezinye izinto eziningi.
Umsebenzi wamanje wokunqoba umsebenzi ohloselwe ukucacisa ukuthi isiphetho somuntu siyoba yini. Kungani ngithi ukusola nokwahlulela kwanamuhla kuyisahlulelo esiphambi kwesihlalo esikhulu sobukhosi sezinsuku zokugcina? Anikuboni lokhu? Kungani umsebenzi wokunqoba uyisigaba sokugcina? Awukhona yini ukuvezwa kwesigaba ngasinye umuntu ayophelela kuso? Awukhona yini ukuvumela wonke umuntu, enkambweni yomsebenzi wokunqoba wokusola nokwahlulela, ukuvezwa kobunjalo bangempela kanye nokuhlelwa ngokwezinhlobo kamuva? Kunokuthi lokhu ukunqoba isintu, kungaba ngcono ukuthi lokhu kuveza ukuthi isigaba ngasinye somuntu siyophelelaphi. Lokho kusho ukuthi, lokhu kuwukwahlulela izono zabo nokuveza izigaba ezihlukahlukene zabantu, kunqunywe ngaleyo ndlela ukuthi babi noma balungile. Ngemva komsebenzi wokunqoba kulandela umsebenzi wokuklomelisa abalungile nokujezisa ababi: Abantu abalalela ngokugcwele, okusho ukuthi abanqotshwe ngokugcwele, bayobekwa esigabeni esilandelayo sokusakaza umsebenzi endaweni yonke; abanganqotshiwe bayobekwa ebumnyameni futhi bayobhekana nenhlekelele. Ngakho abantu bayohlukaniswa ngokohlobo lwabo, abenzi bokubi bayokwenziwa iqembu lezikhohlakali, ngeke baphinde bayibone inhlamvu yelanga, nabenzi bokuhle bayokwenziwa iqembu labalungile, ukuze bathole ukukhanya futhi baphile phakade ekukhanyeni.
Kucashunwe “Iqiniso Langaphakathi Lomsebenzi Wokunqoba (1)” encwadini ethi Izwi Livela Lisenyameni
Labo abahlonipha iqiniso bazithobe emsebenzini kaNkulunkulu bazongena ngaphansi kwegama likaNkulunkulu osenyameni okwesibili—uSomandla. Bazokwazi ukwamukela ukuholwa nguNkulunkulu, futhi bazothola okuningi neqiniso eliphakeme bathole nokuphila okuyiqiniso kwabantu. Bazobona umbono abantu bakudala abangawubonanga: “Ngase ngiphenduka ngiqalaza leliphimbo elalikhuluma nami. Futhi lapho ngiphenduka, ngase ngibona izinduku zamakhandlela zegolide eziyisikhombisa; Futhi phakathi kwezinduku zamakhandlela ayisikhombisa kunofana neNdodana yomuntu, ombethe ingubo efinyelela ezinyaweni, futhi ebophe isifuba ngebhade legolide. Ikhanda Lakhe nezinwele Zakhe zimhlophe kuhle kukavolo, zimhlophe kuhle kweqhwa; namehlo Akhe enjengelangabi lomlilo; Nezinyawo Zakhe zinjengethusi elicolekile, engathi zibaswe esithandweni somlilo; nephimbo Lakhe linjengamanzi amaningi. Futhi ephethe ngakwesokudla izinkanyezi eziyisikhombisa: futhi emlonyeni Wakhe kwaphuma inkemba ebukhali nhlangothi zombili: nobuso Bakhe bunjengokukhanya okuphele kwelanga.” (IsAmbulo 1:12-16). Lo mbono ubonakalisa isimo esiphelele sikaNkulunkulu, kanti futhi umbono onjengalona wesimo Sakhe esiphelele ubonakalisa umsebenzi kaNkulunkulu uma eba yinyama ngalesi sikhathi. Ezikhukhuleni zokujezisa nokwahlulela, iNdodana yomuntu ibonakalisa isimo Sayo semvelo ngokukhuluma amazwi, ukuze bonke abemukela ukusola nokwahlulela Kwakhe babone ubuso beqiniso beNdodana yomuntu, ubuso obuyisibonakaliso esiyiqiniso sobuso beNdodana yomuntu obabonwa nguJohane. (Yebo, konke lokhu ngeke kubonakale kulabo abangawemukeli umsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yombuso.) Ubuso beqiniso bukaNkulunkulu ngeke buchazeke kahle ngamagama omuntu, ngakho-ke uNkulunkulu usebenzisa ukubonakalisa isimo Sakhe semvelo ukukhombisa abantu ubuso Bakhe beqiniso. Okungukuthi bonke labo ababone isimo semvelo seNdodana yomuntu babubonile ubuso beqiniso beNdodana yomuntu, ngoba uNkulunkulu mkhulu kakhulu futhi ngeke achazeke ngamagama abantu. Uma abantu sebesibonile isinyathelo ngasinye somsebenzi kaNkulunkulu eNkathini Yombuso, bayobe sebeyazi incazelo eyiqiniso yamazwi uJohane awakhuluma eNdodaneni yomuntu phakathi kwezibani: “Ikhanda Lakhe nezinwele Zakhe zimhlophe kuhle kukavolo, zimhlophe kuhle kweqhwa; namehlo Akhe enjengelangabi lomlilo; Nezinyawo Zakhe zinjengethusi elicolekile, engathi zibaswe esithandweni somlilo; nephimbo Lakhe linjengamanzi amaningi. Ephethe ngakwesokudla izinkanyezi eziyisikhombisa: futhi emlonyeni Wakhe kwaphuma inkemba ebukhali nhlangothi zombili: nobuso bakhe bunjengokukhanya okuphelele kwelanga.”
Okwedlule：UNkulunkulu wahlenga isintu Enkathini Yomusa, pho kungani esadinga ukwenza umsebenzi Wakhe wokwahlulela ezinsukwini zokugcina?
Okulandelayo：Ingabe umsebenzi kaNkulunkulu wokwahlulela ngesikhathi sezinsuku zokugcina uyahlanza futhi usindise isintu?